त्रिशूली नदीमा खस्यो जीप : RajdhaniDaily.com -
Home प्रदेश प्रदेश ३ त्रिशूली नदीमा खस्यो जीप
चितवन । पृथ्वी राजमार्गको मौवाखोला नजिकैबाट जीप त्रिशूली नदीमा खसेर वेपत्ता भएको छ । धादिङ र चितवनको सिमानामा पर्ने धादिङतर्फको सो खोलाको बाँदरेमोडबाट आज बिहान जीप नदीमा खसेको सशस्त्र प्रहरी तालिम शिक्षालय कुरिनटारका प्रमुख सशस्त्र प्रहरीका वरिष्ठ उपरीक्षक कालिदास धौबजीले जानकारी दिए ।
स्थानीय सुनमाया चेपाङले माछा मार्न थापिएको जाल लिन जाँदा जीप खसेको देखेपछि नजिकैका व्यक्तिमार्फत सशस्त्र प्रहरीलाई खबर आएको र तत्कालै आफ्नो नेतृत्वमा गोताखोर टोली परिचालन भएको उनले बताए ।
अहिले सशस्त्रको सो टोली सहित जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङ र आदमघाटस्थित सशस्त्र टोलीले खोजी कार्य जारी राखेका छन् । प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार खसेको सो जीप एम्बुलेन्स जस्तो देखिने सेतोमा कालो धर्का भएको बताइएको छ । वरिष्ठ उपरीक्षक धौबजीले भने, ‘जीप काठमाडौँतर्फ जाँदै गरेको अनुमान गरिएको छ । जीपमा कति सवार रहेका थिए भन्ने एकीन भइसकेको छैन । गोताखोरले पानीभित्र झण्डै २५ फिट तलसम्म हेर्दासमेत जीप फेला परेको छैन ।’
मनकामना मन्दिर वैशाख महिनाभर बन्द
काठमाडाैं । कोरोना संक्रमण जोखिम बढेसँगै प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थस्थल मनकामना मन्दिर र गोरखकाली मन्दिरमा नित्य बाहेकको पूजा बन्द हुने भएको छ । मंगलबार बसेको...
भारतमा कोरोना संक्रमण दरमा दिनहुँ नयाँ रेकर्ड कायम भइरहेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा २ लाख ९४ हजार २९० जना संक्रमित थपिएका छन्। यो...
सर्वदलीय बैठक : गणतन्त्रविरोधी गतिविधिविरुद्ध सत्ता र प्रतिपक्षको समान मत
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट आह्वान गरिएको सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय दलको सर्वदलीय बैठकमा सत्तापक्ष र मुख्य प्रतिपक्षी दलले गणतान्त्रिक परिवर्तनका पक्षमा...
थप ६५९ जनामा कोरोना पुष्टि, ७ जनाको मृत्यु
काठमाडौँ । पछिल्लो २४ घण्टामा थप ६५९ जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ । योसँगै हालसम्म सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या दुई लाख ५८ हजार ८४० पुगेको...
स्याङ्जामा मेला, महोत्सव र सम्मेलनमा रोक
प्रदेश ४ Sushila Bishwokarma - March 5, 2020 0
स्याङ्जा । विश्वभर बढ्दै गएको कोराना भाइरस (कोभिड—१९) को संक्रमण र सन्त्रासले स्याङ्जामा पार्न सक्ने प्रभावका लागि जिल्ला समन्वय समिति र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले...
न्यु स्टार नेशनल युवा क्लबको आयोजनामा आकस्मिक रक्तदान
प्रदेश Dhruba Lamsal - August 29, 2020 0
बारा । बाराको प्रसौनी गाउपालिकामा आकस्मिक रक्तदान गरिएका छ । वडा नम्वर ४ खुटवाजब्दीमा कोभिड– १९ महामारीको कारण ब्लड बैंकमा रगतको चरम अभावले गर्दा...
३ जनाको नाम सिफारिस, आजै गर्भनर नियुक्ति हुने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरका लागि ३ जनाको नाम सिफारिस भएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको संयोजकत्वमा गठित सिफारिस समितिले सरकारसमक्ष पूर्व...
५४.७५ अङ्कले घट्याे नेप्से, ९ अर्बको कारोबार
अर्थ Dhruba Lamsal - January 31, 2021 0
काठमाडाैं । लगातार उकालो लाग्दै आएको धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज उच्च अङ्कले ओरालो लागेको छ । नयाँ नयाँ रेकर्ड बनाउँदै...
Breaking News Sushila Bishwokarma - October 16, 2020 0
बिचार Kumar Raut - August 3, 2020 0
प्रदेश ५ Sushila Bishwokarma - May 31, 2020 0
तुलसीपुर । दाङका एक कोरोना सङ्क्रमितमा डेङ्गु रोग भेटिएको छ । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय दाङका कोभिड–१९ फोकल पर्सन कमल चन्दका अनुसार बबई गाउँपालिका वडा...
भर्खरै Kumar Raut - November 17, 2020 0
आज साँझ मन्त्रिपरिषद बैठक, प्रधानमन्त्रीले प्रदेशसभा विघटन गर्न सक्ने !
प्रमुख Dhruba Lamsal - December 25, 2020 0
काठमाडौं । आज साँझ मन्त्रिपरिषदको बैठक बस्ने भएको छ । नेकपा विभाजनपछि पहिलो पटक मन्त्रिपरिषद बैठक बस्न लागेको हो । प्रायः सोमवार र विहीवार मन्त्रिपरिषदको...
नेकपा स्थायी कमिटी बैठक शुरु, प्रधानमन्त्रीसमेत सहभागी
प्रमुख Sushila Bishwokarma - December 16, 2020 0
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को स्थायी कमिटी बैठक शुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बैठक शुरु भएको नेकपा प्रचार तथा प्रकाशन...
पूर्णभक्त दुवाल - April 19, 2021
सुभाष साह - April 21, 2021
एजेन्सी - April 20, 2021